के घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण स्थायी कपाल हटाउन वास्तवमै सक्षम छ? - नोबेल इनोवेशन-टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
के घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण स्थायी कपाल हटाउन वास्तवमै सक्षम छ? - नोबेल इनोवेशन
समय: 2019-09-30 हिट्स: 56
जब धेरै व्यक्तिले कपाल हटाउने विधि छनौट गर्दछन्, पहिलो कुरा भनेको केश हटाउने प्रभाव कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्दछ, त्यहाँ अवशेष छ कि छैन, र त्यसपछि कपाल हटाउने समयको लम्बाई। अब त्यहाँ केश हटाउने उत्पादनहरू छन् जुन स्थायी रूपमा हटाउन सकिन्छ। त्यहाँ निश्चित रूपले धेरै व्यक्तिहरू छन् जसलाई प्रश्नहरू छन्। के यो साँचो हो? नोबेल इनोवेशनलाई आज सबैसँग कुरा गरौं।
कपाल हटाउने वर्तमान विधिमा, स्थायी कपाल हटाउने चार शब्दहरू लेजर कपाल हटाउने उपकरण र आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग उपकरणको दुई उत्पादनहरू हुन्। के फोटोन कपाल हटाउन स्थायी रूपमा कपाल हटाउन सक्नुहुन्छ?
पहिले कपालको बृद्धि चक्रको बारेमा कुरा गरौं।
कपालको विकास चक्रीय हो र वृद्धि अवधि, रिग्रेशन पिरियड र विश्राम अवधिमा विभाजित हुन्छ।
बृद्धि अवधि: बढेको अवधिमा कपालको वृद्धि २- 0.27 वर्षको लागि प्रति दिन ०.0.40 ~ ०.2० मिलिमिटर हुन्छ, निरन्तर बृद्धि द्वारा विशेषता, र त्यसपछि प्रतिगमन अवधिमा प्रवेश गर्दछ।
डिजेनेरेटिव अवधि: डिजेनेरेटिव अवधिमा प्रवेश गरेपछि, कपालको फोलिकलको तल्लो भागमा कपालको बल्बसमेत कपाल बढ्न थाल्छ। कपाल अब बढ्दैन र छाडा हुन्छ र झर्छ। प्रतिगामी अवधिमा कपाल को लागी १% को लागी; सामान्यतया २ देखि weeks हप्ता सम्म, र त्यसपछि बाँकी अवधि प्रवेश गर्दछ।
विश्राम अवधि: आराम अवधिको अवधिमा, कपालको फोलिकुलको तल्लो भाग पूर्णतया शोष हुन्छ, कपाल बहाइन्छ, र बाँकी अवधिमा कपालको लगभग १%% भाग हुन्छ; बाँकी अवधि to देखि months महिनासम्म रहन्छ, र त्यसपछि कपालको फोलिकल विकास अवधिमा प्रवेश गर्दछ, र नयाँ कपाल बढ्छ।
केशको बृद्धि चक्रको बारेमा कुरा गरिसकेपछि, हामी लेजर कपाल हटाउने उपकरण र आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग यन्त्रको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरौं।
आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग एक छनौटिक प्रकाश (फराकिलो स्पेक्ट्रम प्रविधि) पाइरोलिसिस सिद्धान्त कडा पल्स्ड लाइट स्रोतको प्रयोग गरेर कपाल हटाउन प्राप्त गर्दछ। आईपीएल कपाल हटाउने घरको प्रयोग लेजरको भित्री कोमल र गैर-आक्रमणकारी उपचार हो, जसले कपालको फोलिकुलमा मेलानोसाइट्स एक विशिष्ट ब्यान्डमा प्रकाश अवशोषित गर्न प्रयोग गर्दछ, जसले कपालको उष्णता उत्पन्न गर्दछ, यसैले छनौट गरेर कपालको कपाल नष्ट गर्दा बेवास्ता गर्दछ। आसपासका ऊतकहरु लाई क्षति। कपाल हटाउनुहोस्।
लेजर कपाल हटाउने विधि छनौटयुक्त फोटोथर्मल गतिशीलतामा आधारित छ, लेजर तरंगदैर्ध्यको नाडी उर्जालाई ठीकसँग नियमन गर्दा, छालाको सतहको माध्यमबाट लेजर बत्तीले कपालको जरामा पुग्न सक्नेछ, थर्मल उर्जामा प्रकाश उर्जाको अवशोषण र विनाशको विनाश गर्दछ। कपाल follicles, यसैले वरिपरिको ऊतक, पीडा हल्का प्रविधिको क्षति नगरी एकै समयमा हराएको कपाल पुन: उत्पन्न गर्ने क्षमता।
लेजर कपाल हटाउने कपाल हटाउने स्थायी रूप हो जुन कपालको फोलिकल्सलाई क्षति वा नष्ट गर्न सक्छ।
जे होस्, कपाल फेरि बढ्ने सम्भावना छ। यदि लेजर कपाल हटाउने क्रममा कपालको कटा क्षतिग्रस्त छ तर पूरै नष्ट गरिएको छैन भने, कपालको बृद्धि हुने सम्भावना अधिक हुन्छ।
त्यसकारण धेरै डाक्टरहरूले लेजर कपाल हटाउने काम स्थायी कपाल हटाउनको सट्टा स्थायी कपाल हटाउनेको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
यदि कपालका रोमहरू पहिले नै नेक्रोटिक छन् भने, कपाल हटाउन स्थायी हुन्छ। यदि कपालको फोलिकल केवल क्षतिग्रस्त छ भने, कपाल फेरि बढ्नेछ। लामो कपाल लामो हुन्छ कि कपाल फेरि बढ्छ कपाल को वृद्धि चक्र मा निर्भर गर्दछ जुन प्रत्येक व्यक्तिको लागि अद्वितीय हो।
त्यसकारण, स्थायी कपाल हटाउनु एक सानो सम्भावना घटना हो। सामान्य परिस्थितिमा, आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग उपकरण स्थायी कपाल हटाउन सक्दैन, अधिकतम, तपाईं केवल आफ्नो कपाल वृद्धि चक्र लामो बनाउन सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: कडा नाडी घर प्रयोग र लेजर कपाल हटाउने उपकरण बीच भिन्नता
अर्को: आरएफ भनेको के हो?